Momba anay - Nanchang Lijinghui Trading Co., Ltd.
Niorina tamin'ny 2014 izahay ary manomboka amin'ny 2007 ny orinasa;
Ny ozinina ananantsika manodidina ny 2000-3000M³Aiza no misy ny faritanin'i JiangXi City Nanchang miaraka amin'ny fidirana fitaterana mety.
Fotoana fananganana orinasa
Isan'ny mpiasan'ny orinasa
Ny orinasa manokana amin'ny mpanamboatra sy manondrana ny karazan'akanjo fanenomana; Ny anay no vokatra lehibe dia ny T Shirt, ny Polo Shirt, ny Hoody Sweatshirt, ny akanjo ho an'ny ankizy, ny ambony tanky, ny fanatanjahan-tena ary ny fitafiana fitafiana hafa.
Ny baiko OEM sy ODM no tena ataontsika, ny kaomandy fanandramana kely (Low MOQ) dia ekena ary namboarina ho marika manokana, marika, fonosana ihany koa. Efa nanondrana mpanjifa an'arivony mahery avy amin'ny firenena maherin'ny 30 isan-karazany izahay; ary ny sandan'ny fanondranana isan-taona dia tonga tamin'ny $ 100 tapitrisa; Manangana fifandraisana tsara amin'ireo mpanjifanay marika izahay toy ny Carrefour Group sy Two Farms Inc ary Calk Group sns ...
Na ny fisafidianana vokatra amin'izao fotoana izao avy amin'ny katalaoginay na ny fikatsahana fanampiana momba ny injeniera ho an'ny fangatahanao dia azonao atao ny miresaka amin'ny ivon-toeran'ny mpanjifantsika momba ny fepetra takianay. Raisinay tsara ireo mpanjifa hanangana fiaraha-miasa ary hamorona ho avy mamirapiratra miaraka aminay.
Kalitao avo lenta sy mahomby
Ny orinasa dia manome vokatra avo lenta miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana sy ny ekipa varotra matihanina; Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay efa za-draharaha (pepole 100 eo ho eo) sy ny ekipa mpivarotra matihanina (pepole 10 eo ho eo) dia misy foana miresaka momba ny zavatra takinao sy miantoka ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia nampiditra andiana fitaovana mandroso ao anatin'izany ny milina fanjairana, ny milina vy ary ny milina fanontana.
Ho fanampin'izay, afaka mihaona ny vokatray
RERE sy azo antoka Free and Low Cadmium ary nahazo mari-pahaizana BSCI izahay.
Mpanjifa manerana an'izao tontolo izao
Sina, USA, Canada, France, UK, Philippines, Qatar, Ghana, Nigeria, South Africa
Asa fitoriana: fananganana ny marika anao
Soatoavina fototra: Fifandraisana bebe kokoa, fifampitokisana, ary mpamatsy toe-javatra mandresy.